ဂျော်ဂျီယာနှင့် Golden Visa အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှု
ကျွန်ုပ်တို့သည်ဂျော်ဂျီယာတွင်စီးပွားရေးလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး ၀ န်ဆောင်မှုကိုပေးသည်။
အကောင်းဆုံး ဂျော်ဂျီယာတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသားအဖြစ်ခံယူသူများ နှင့်ရှေ့နေများ ဂျော်ဂျီယာတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသားနှင့်အိမ်ခြံမြေအကျိုးဆောင်များအတွက်ပွဲစားဂျော်ဂျီယာရှိနိုင်ငံသားအစီအစဉ်သည်ဖောက်သည်များ၏ကာကွယ်မှုအတွက်တွဲဖက်လုပ်ဆောင်သည်။
ဂျော်ဂျီယာအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုယ်စားလှယ်များမှနိုင်ငံသားကဂျော်ဂျီယာတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခွင့်၊ ဂျော်ဂျီယာရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်များမှနိုင်ငံသား၊ ဂျော်ဂျီယာတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်ဖြင့်နိုင်ငံသား၊ ဂျော်ဂျီယာတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်ဒုတိယနိုင်ငံသား၊ ဂျော်ဂျီယာတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှု၊ ဂျော်ဂျီယာတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်အမြဲတမ်းနိုင်ငံသား၊ ဂျော်ဂျီယာတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်ယာယီနိုင်ငံသား၊ ဂျော်ဂျီယာတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်ဖြင့်နိုင်ငံသား၊ ဂျော်ဂျီယာတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်ဖြင့်နိုင်ငံသား၊ ဂျော်ဂျီယာတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခွင့်၊ ဂျော်ဂျီယာတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်ဖြင့်နေထိုင်မှု၊ ဂျော်ဂျီယာရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်ဖြင့်နေထိုင်မှု၊ ဂျော်ဂျီယာတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခြင်း၊ ဂျော်ဂျီယာတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခြင်း၊ ဂျော်ဂျီယာတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခြင်းနှင့်နိုင်ငံသားဖြစ်ခြင်း၊ ဂျော်ဂျီယာတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခြင်းနှင့်နိုင်ငံသားဖြစ်ခြင်း၊ ဂျော်ဂျီယာရှိစီးပွားရေးနေထိုင်မှုအစီအစဉ်များ၊ ဂျော်ဂျီယာရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်ဖြင့်နေထိုင်ခြင်း၊ ဂျော်ဂျီယာနိုင်ငံကူးလက်မှတ်, ဒုတိယ pas ဂျော်ဂျီယာရှိအားကစားအစီအစဉ်များ၊ ဂျော်ဂျီယာတွင်ဒုတိယပတ်စ်ပို့၊ ဂျော်ဂျီယာတွင်ဒုတိယမြောက်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်၊ နေထိုင်ခွင့်နှင့်ဂျော်ဂျီယာရှိနိုင်ငံကူးလက်မှတ်၊ ဂျော်ဂျီယာနိုင်ငံ၏သံတမန်ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်၊ ဂျော်ဂျီယာနိုင်ငံ၏ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်၊ ဂျော်ဂျီယာနိုင်ငံကူးလက်မှတ်၊ ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ဂျော်ဂျီယာတွင်ဒုတိယ၊ ဂျော်ဂျီယာနိုင်ငံကူးလက်မှတ်အစီအစဉ်များ၊ ဂျော်ဂျီယာတွင်ရွှေဗီဇာ၊ ဂျော်ဂျီယာတွင်ရွှေဗီဇာ၊ ဂျော်ဂျီယာတွင်ရွှေဗီဇာအစီအစဉ်များ၊ ဂျော်ဂျီယာတွင်ရွှေဗီဇာအစီအစဉ်၊ ဂျော်ဂျီယာတွင်ဒုတိယရွှေဗီဇာ၊ ဂျော်ဂျီယာတွင်ဒုတိယရွှေဗီဇာအစီအစဉ်၊ ဂျော်ဂျီယာတွင်နေထိုင်ခွင့်နှင့်ဂျော်ဂျီယာတွင်နေထိုင်သောရွှေဗီဇာ၊ ဂျော်ဂျီယာတွင်ရွှေဗီဇာနိုင်ငံသား၊ ဂျော်ဂျီယာရှိရွှေဗီဇာအစီအစဉ်၊ ဂျော်ဂျီယာရှိရွှေဗီဇာအစီအစဉ်များ
ဂျော်ဂျီယာတွင်ရင်းနှီးမြှပ်နှံခြင်းဖြင့်သင်၏နိုင်ငံသားအားလုံးအတွက်“ 1 stop solutions” ။
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှုအတွက်ဂျော်ဂျီယာတွင်အနည်းဆုံးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၂၅၀၀၀ (၃၀၀၀၀၀ GEL)
မြို့ပြအသိုင်းအဝိုင်းများနှင့်အားရကျေနပ်ဖွယ်ကောင်းသောမြို့များ၊ တောင်တန်းများကိုလှပသောသဲသောင်ပြင်များနှင့်ပေါင်းစပ်ထားသည့်လှပသောလယ်ကွင်းများ၊ ရာသီဥတုလေးခုစီမှကမ်းလှမ်းသောအေးဆေးတည်ငြိမ်သည့်ဝန်းကျင်အပြင်ဂျော်ဂျီယာကိုတောင်ပိုင်းတွင်နေထိုင်ရန်အကောင်းဆုံးနေရာဖြစ်သည်။ ပြည်နယ်အနှံ့အပြားတွင်သင်ကမ္ဘာအနှံ့မှအစားအစာများကိုဖြန့်ဖြူးခြင်း၊ ကျွမ်းကျင်မှုနှင့်အပန်းဖြေခြင်းဂိမ်းများနှင့်ကဖေးများကိုရှာဖွေတွေ့ရှိလိမ့်မည်။
ဂျော်ဂျီယာနိုင်ငံတွင်နေထိုင်ခြင်းကိုတန်ဖိုးထားရန်ကန ဦး ခြေလှမ်းမှာယနေ့ခေတ်တွင်ပိုမိုလွယ်ကူသောဗီဇာရရန်ဖြစ်သည်။
၂ ဝ ၁၄ ခုနှစ်စက်တင်ဘာတွင်မကြာသေးမီကထုတ်ပြန်ခဲ့သည့်ဂျော်ဂျီယာဥပဒေများကြောင့်ခရီးသွားလုပ်ငန်းအတွက်ဗီဇာရရှိရန်သိသိသာသာပိုမိုလွယ်ကူသွားသည်။ မည်သည့်ဂျော်ဂျီယာကောင်စစ်ဝန်ရုံးသို့မဟုတ်လှုပ်ရှားမှုဌာနမှသင်၏နိုင်ငံတွင်အခြေခံကျသောအပြောင်းအလဲများရှိနိုင်သနည်း၊ သို့မဟုတ်သင်လျှောက်ထားနိုင်သည်။ ဝဘ်၏နည်းလမ်းများ။
မည်သည့်အကြောင်းပြချက်ဖြင့်မဆိုခရီးသွားသူများစွာအတွက်အွန်လိုင်းဗီဇာရရန်မြန်ဆန်စိတ်ချရသောလုံခြုံစိတ်ချရသောနည်းဗျူဟာဖြစ်သည်။ စီးပွားရေးသို့မဟုတ်ထူးခြားသောကုသမှုအတွက်ဖြစ်စေ၊ တစ် ဦး တည်း၊ မိသားစု၊
ရေစီးကြောင်းဆိုင်ရာအတွေးအခေါ်များ၊ အတွေးများ၊ အစီအစဉ်များနှင့် ပတ်သက်၍ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းအရကျွန်ုပ်တို့သည်လူနေမှုအဆင့်အတန်းအမျိုးမျိုးရှိသောဥပမာအားဖြင့်တိတ်ဆိတ်သောလူမျိုးသို့မဟုတ်ကြွယ်ဝသောလက်ရှိဘဝလမ်းစဉ်၊ သို့မဟုတ်ဘ ၀ မပျက်နိုင်သည့်ဘဝများရှိသောနိုင်ငံများကိုရှာဖွေသည်။
ဂျော်ဂျီယာနိုင်ငံတွင်နေထိုင်မှုပုံစံအမျိုးမျိုးရှိသည်၊ ဂျော်ဂျီယာနိုင်ငံတွင်နေထိုင်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ သင်၏အားစိုက်ထုတ်မှုကိုထုတ်လွှင့်ရန်နောက်ထပ်တစ်ခုဖြစ်သည်။
Tbilisi သည်ထင်ရှားသောမြို့တော်ဖြစ်ပြီးဂျော်ဂျီယာ၏မြို့တော်ဖြစ်သည်။ ဂျော်ဂျီယာ၏ရှေးဟောင်းအမွေအနှစ်များနှင့်ရှေးဟောင်းဥရောပသင်္ချာဆိုင်ရာအဆောက်အအုံများကိုကွင်းဆင်းပုံစံနှင့်ဆက်သွယ်ထားသည်။ ၎င်းတွင်အနီးအနားရှိစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများနှင့်စျေးဆိုင်ငယ်များရှိသည်၊ ၎င်းသည်ဂျော်ဂျီယာ၏တုန်လှုပ်နေသောစိတ်နှလုံးဖြစ်သည်။ ဂျော်ဂျီယာသို့အလည်အပတ်သွားသည့်အခါ၊
နှလုံးသားများကိုစိမ့်ဝင်စေသောလမ်းများ၊ စိမ်းလန်းသောရင်ပြင်များ၊ ရေကန်များ၊ အစိမ်းရောင်ချိုင့်ဝှမ်းများနှင့်ပန်းချီကားများဖြင့်နှလုံးကိုပျော်ဝင်စေသည့်ထူးခြားသည့်မြို့တစ်မြို့ဖြစ်သည်။ ဂျော်ဂျီယာအမျိုးသားပြတိုက်၊ ဂျော်ဂျီယာ၏သမိုင်းကြောင်းနောက်ခံကိုရှာဖွေရန်လျောက်ပတ်သောနည်းလမ်းနှင့်ထို့အပြင်လျောက်ပတ်သောနည်းလမ်း။
အတိတ်၏ဤလျင်မြန်သောအကျိုးသက်ရောက်မှုပြီးနောက် ၄ ရာစုကိုပြန်စဉ်းစားကာပါးရှားနှင့်တူရကီစော်ဘွားများအလုပ်လုပ်ခဲ့သည့်စစ်မှန်သော Narikala ခံတပ်ရှိခဲ့သည်။ ဂျော်ဂျီယာတွင်နေထိုင်ခြင်းသည် ပို၍ ချစ်ခင်တွယ်တာဖွယ်ကောင်းသည်။ မင်းသည်သင်၏စိတ်နှင့်စိတ်ကိုပျော်ရွှင်စွာခံစားနိုင်သည့် Chreli Abano တွင်တည်ရှိပြီးခိုင်မာသည့်နွေးထွေးသောရေချိုးခန်းဖြစ်သော Tbilisi ရှိ၎င်း၏ဆာလ်ဖာရေပန်းများနှင့်မှတ်သားပြီးသင်ကအခြားလောကသာမန်ချွေးပေါင်းအိမ်ကို ၀ ယ်ရန်ရည်ရွယ်သည်။ ရှေ့ဆက်အချိန်အကြံပြုသည်။
တီဘီလီစီသည်လည်ပတ်နေသောကြီးမားသောမြို့ဖြစ်ပြီး၎င်း၏ဆုံးဖြတ်ချက်သည်ပိုမိုကျယ်ပြန့်သောဆုံးဖြတ်ချက်များနှင့်အိမ်နီးချင်းတစ် ဦး ချင်း၊ ကြည့်ရှုသူများနှင့်နိုင်ငံခြားကွန်ယက်အားလုံးအတွက်တံခါးဖွင့်ပေးသည်။
ဂျော်ဂျီယာလူ ဦး ရေမှာ ၅ သန်းနီးပါးရှိသည်။ အလွန်ကြီးမားသည်။ လမ်းဟောင်းများရှိသော်လည်းကြီးမားသောမြို့ကြီးများကဲ့သို့ဥပမာအားဖြင့်ဒက်ထရွိုက်သို့မဟုတ်လော့စ်အိန်ဂျယ်လိစ်ကဲ့သို့အလုပ်များမည်မဟုတ်။
သို့သော်၎င်းသည်“ ဂျော်ဂျီယာတွင်နေထိုင်ခြင်းသည်လူတိုင်းအတွက်အကျိုးသင့်အကြောင်းသင့်ရှိပါရဲ့လား” ကိုသိရန်ဖြစ်သည်။
ထည့်သွင်းစဉ်းစားသမျှသည်၎င်းသည်“ ဒေါ်လာတစ်သိန်းတစ်ထောင်တောင်းခံခြင်း” ဖြစ်သည်။ ဂျော်ဂျီယာနိုင်ငံတွင်နေထိုင်ခြင်းသည်ကျိုးနွံ။ မများလှပေ။
သင်၏နေထိုင်မှုပုံစံနှင့်လယ်ကွင်းစျေးကွက်ဟောင်းများနှင့်စျေးဆိုင်ငယ်များမှသည်စျေးကြီးဆုံးအဆောင်များမှ စတင်၍ ဂျော်ဂျီယာ၏အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောအစက်အပြောက်များနှင့် ပတ်သက်၍ အလွန်အမင်းစိတ်အားထက်သန်မှုအပေါ်တွင်မူတည်သည်။
ဂျော်ဂျီယာလာရီနှင့် ပတ်သက်၍ အကျိုးရှိသောအရာမှာ၎င်းသည် ၀.၃၅ ဒေါ်လာသို့ရောက်ရှိသည်။ ဒေသခံများနှင့်နေထိုင်သူများအတွက်အသုံးစရိတ်နည်းသောခရီးသွားများ၊ အပန်းဖြေသူများအတွက်သတင်းများထုတ်လွှင့်ခြင်း။ အစားအစာနှင့်အဖျော်ယမကာများသည်တစ်ပြိုင်နက်တည်းကျိုးကြောင်းဆီလျော်ပြီးအရသာရှိပါသည်။
မည်သို့ပင်ဖြစ်စေလမ်းပေါ်မှအစားအစာလား၊ သာမန်ထက်စားသောက်ဆိုင်များတွင်လားဆိုတာလား။ ထို့အပြင်နိုင်ငံပိုင်တည်းခိုခန်းများနှင့်မှတ်သားလောက်စရာတည်းခိုခန်းများသည်အလယ်အလတ်ရှိပြီးခြင်္သေ့ဝေစုအတွက်သင့်လျော်သည်။ ဂျော်ဂျီယာတွင်ဥပဒေလမ်းညွှန်ချက်များအရခွင့်ပြုထားသောအနိမ့်ဆုံးလစာမရှိပါ။ ထိုနှုန်းအရပုံမှန်လမှလခသည်အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၅၀၀ ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ဂျော်ဂျီယာတွင်နေထိုင်ခြင်းသည်ဒေသခံပြည်သူများနှင့် guests ည့်သည်နှစ် ဦး အတွက်အကျိုးသင့်အကြောင်းသင့်ရှိကြောင်းနောက်ထပ်စစ်ဆေးမှုတစ်ခုဖြစ်သည်။
ကျနော်တို့စကားပြောသောအချိန်တွင်အများဆုံးဖွယ်ရှိသည်, ဒါဟာဘဏ္Georgiaာရေးအထူးကု၏မျက်စိဖမ်းမိ, ငါတို့ဂျော်ဂျီယာ၏ငွေကြေးဆိုင်ရာဖွဲ့စည်းပုံမှာအနီးအနားတစ်ချက်ရှိသည်အကြောင်းကိုဘယ်လို။
ထို့အပြင်ဂျော်ဂျီယာလူ ဦး ရေအများစုသည်ဂျော်ဂျီယာလူမျိုး ၈၅% ရှိပြီးအာမေးနီးယား၊ အဇာဘိုင်ဂျန်နှင့်အခြားလူနည်းစုများဖြစ်သည်။
၎င်း၏လှပသောရှုခင်း၊ လေထုအမျိုးမျိုးနှင့်အမှောင်ပင်လယ်နှင့်ပိုးလမ်းပေါ်ရှိareaရိယာသည်ဂျော်ဂျီယာကိုစပျစ်ရည်လုပ်ငန်းနှင့်ကော့ကေးဆပ်တောင်တန်းများရှိရွှေ၊ ငွေ၊ ကြေးနီနှင့်သံသတ္တုများတူးဖော်ခြင်းအတွက်ဂျော်ဂျီယာကိုဝိုင်လုပ်ငန်းနှင့်အမျိုးမျိုးသောလုပ်ငန်းများသို့သယ်ဆောင်ခဲ့သည်။
ဆိုဗီယက်ခေတ်ပြီးနောက်ဂျော်ဂျီယာအစိုးရများသည်၎င်း၏ငွေကြေးဆိုင်ရာဖွဲ့စည်းပုံကိုအကန့်အသတ်မရှိသောစီးပွားရေးသို့ရွှေ့ပြောင်းရန်ကြီးမားသောယုံကြည်မှုကိုရယူရန်ကြိုးပမ်းခဲ့ကြရာရင်းနှီးကျွမ်း ၀ င်မှုမရှိသောဘဏ္specialistsာရေးကျွမ်းကျင်သူများအတွက်အချိန်ကြာမြင့်စွာကောင်းမွန်သောဘဏ္climateာရေးအခြေအနေတွင်တည်ငြိမ်သောစီးပွားရေးလုပ်ရန်ကြီးမားသောပွင့်လင်းတံခါးကိုပြောနေခြင်းဖြစ်သည်။ အထူးသဖြင့်ဆိုဗီယက်ခေတ်တွင်ဂျော်ဂျီယာလူမျိုးများသည်ယခင်ကရေရှည်တွင်တွေ့ကြုံခံစားခဲ့ရသောအငြင်းပွားမှုများ။
ရေကန်များ၊ ကမ်းခြေများနှင့်ဓာတ်သတ္တုမိုးကြိုးများရှိသည့်အလွန်အံ့အားသင့်ဖွယ်ကောင်းသောနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်ပြီး ၂၀၀၈ ခုနှစ်တွင် Georgia ည့်သည်အရေအတွက်သည် ၄ ​​သန်းကျော်ကျော်။ တစ်ဆင့်တိုးများလာခဲ့သည်။
ကျွန်ုပ်တို့ကပြောနိုင်သည်မှာကုန်းတွင်းပိုင်းငွေထည့်ခြင်းသည်ယင်း၏ကျိုးနွံသောကုန်ကျစရိတ်ကြောင့်ငွေသားယူရန်နောက်ထပ်နည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ သို့သော်သင်သည်လုပ်သားတစ် ဦး သို့မဟုတ်မသိသောခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုမခံရလျှင်အထီးကျန်အခန်းငှားရမ်းခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍၊ ဂျော်ဂျီယာတွင်အကုန်အကျများသော်လည်း၊ အခြားသောဥရောပနိုင်ငံများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်တန်ဖိုးမရှိပေ။
အရာ ၀ တ္ထုကိုထုပ်ပိုးရန်အတွက်ဂျော်ဂျီယာနိုင်ငံတွင်နေထိုင်ခြင်းသည်အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိလျောက်ပတ်စွာ၊
အမျိုးမျိုးသောလူ့အဖွဲ့အစည်းများသည်ပလတ်စတစ်ပုံစံအသစ်များ၊ ပုံစံအသစ်များ၊ အစားအစာများ၊ မတူကွဲပြားသည့်ပုံစံများကိုတစ်သမတ်တည်းပြန်ထုတ်ပေးသည်။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ၊ ဂျော်ဂျီယာရှိအစားအစာများကိုဂျော်ဂျီယာပြည်သူများမည်သို့နေထိုင်ခဲ့သည်နှင့်အမျှဖော်ထုတ်ထားသည်။
အများပြည်သူစည်းဝေးကြီးသည်“ supra” ဟူသည်မိသားစုတစ်စုချင်းစီကိုအစာစားရန်နှင့်သူတို့၏နေ့ရက်များကိုဆွေးနွေးရန်အတွက်ပေါင်းစပ်ထားသည့်အမျိုးအစားတစ်ခုဖြစ်စေရန်ဖြစ်သည်။ ဂျော်ဂျီယာနိုင်ငံ၏ဓလေ့ထုံးတမ်းဓလေ့ထုံးစံကိုမြှင့်တင်ရန်ဂျော်ဂျီယာစပျစ်ရည်သည်အရှေ့တိုင်းခရစ်ယာန်ဂျော်ဂျီယာနှင့်ချိတ်ဆက်ထားသည် ထိ
အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၂၅၀၀၀ (၃၀၀၀၀၀ GEL)
ဤနယ်ပယ်များ၌ဂျော်ဂျီယာနိုင်ငံမှနိုင်ငံခြားစီးပွားရေးကိုတိုက်ရိုက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုစွမ်းအင်ထုတ်လုပ်မှု it ည့်ဝတ်ပြုခြင်း၊ ဟိုတယ်နှင့်အပန်းဖြေစခန်းများ / အိမ်ခြံမြေထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေး ၀ န်ဆောင်မှု
ဂျော်ဂျီယာသည်ပင်လယ်နက်၏အရှေ့ဘက်ခြမ်းတွင်တည်ရှိပြီးဥရောပနှင့်အာရှနယ်စပ်တွင်တည်ရှိသည်ဟုဆိုလိုသည်။ ၎င်းသည်စီးပွားရေးသို့မဟုတ်ရာသီဥတုပျော့ပျောင်းသောစီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးရန်အတွက်နေရာကောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၂၀၁၇ မတ်လမှ စတင်၍ နိုင်ငံသားများသည်ဗီဇာမရှိပဲ Schengen နိုင်ငံများသို့ခရီးသွားလာနိုင်သည်။ ၎င်းသည်ရိုးရှင်းသော Schengen ဗီဇာလျှောက်ထားသူများအတွက်ဂျော်ဂျီယာနိုင်ငံသားဖြစ်မှုကိုဖြစ်စေသည်။ မယုံနိုင်လောက်အောင်ကုန်ကျစရိတ်သက်သာပြီးမိသားစုတစ်ခုလုံးအတွက်တစ်ကြိမ်တည်းလှူဒါန်းခြင်းဖြင့်ရရှိနိုင်သည်။
သင်၏လျှောက်လွှာတွင်သင်၏မိသားစုဝင်များပါ ၀ င်နိုင်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာသင့်အိမ်ထောင်ဖက်နှင့်အသက် ၂၆ နှစ်အောက်သင့်မှီခိုနေသည့်ကလေးများအားလုံးကိုဆိုလိုသည်။ ဤအတွက်အလှူငွေပမာဏကိုမြှင့်စရာမလိုပေ။
အကယ်၍ သင်သည်သင်ကပြည်နယ်ဘဏ္treာရေးသို့လှူဒါန်းခဲ့လျှင်ဂျော်ဂျီယာနိုင်ငံသားဖြစ်မှုအစီအစဉ်၏မူဘောင်အတွင်း၌သင်သည်ဂျော်ဂျီယာနိုင်ငံသားတစ် ဦး ဖြစ်လာနိုင်သည်။ ၎င်းသည်နိုင်ငံသားဖြစ်မှုကိုမြှင့်တင်ပေးသည့်တစ်ကြိမ်မဟုတ်ပြန်အမ်းနိုင်သောအသုံးစရိတ်ဖြစ်သည်
လျှောက်လွှာတင်သည့်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းသည်အလွန်မြန်ဆန်ပါသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ဂျော်ဂျီယာနိုင်ငံသားဖြစ်မှုကိုလှူဒါန်းပြီးသည့်နောက်လျှောက်လွှာတင်ပြီးသည်နှင့်တစ်လမျှသာဖြစ်သည်။ နိုင်ငံသားဖြစ်ခွင့်ကိုကန့်သတ်ထားခြင်းမရှိပါ။
သင်မိသားစုဝင်တစ် ဦး ဦး အတွက်လျှောက်ထားသည်ဖြစ်စေထောက်ပံ့ငွေပမာဏမှာယူရို ၁၂၅၀၀၀ ဖြစ်သည်။
ဂျော်ဂျီယာနိုင်ငံသားဖြစ်ရန်အရည်အချင်းပြည့်မီရန်သင် ၁၂၅၀၀၀ ယူရို (တစ်ယောက်တည်းဖြစ်စေ၊ သင့်မိသားစုနှင့်အတူတူဖြစ်စေ) လှူဒါန်းရန်လိုအပ်သည်။ ထောက်ပံ့ငွေပြီးဆုံးလျှင်သင်သည်ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်မှုရုံးသို့ပြောင်းရွှေ့ကြောင်းအထောက်အထားနှင့်အတူလျှောက်ထားနိုင်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏အသင်း နိုင်ငံသားအဖြစ် ဂျော်ဂျီယာအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုယ်စားလှယ်များကသည် နှင့် နိုင်ငံသားအဖြစ် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့် ရှေ့နေများ ဂျော်ဂျီယာအတွက် ဂျော်ဂျီယာရှိဖောက်သည်များနှင့်သူတို့၏မိသားစုများကိုဂျော်ဂျီယာမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသားအဖြစ်ကိုထောက်ပံ့ရန်၊ ဂျော်ဂျီယာမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်အခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအခွင့်အလမ်းများကိုနိုင်ငံ ၃၇ နိုင်ငံမှထောက်ပံ့သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ဆောင်မှုများသည်ဂျော်ဂျီယာမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုသို့မဟုတ်ဂျော်ဂျီယာမှ Golden Visa ဖြင့်နေထိုင်ခွင့်သို့မဟုတ်ဂျော်ဂျီယာမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုသို့မဟုတ်ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်ခွင့်ကိုသာကန့်သတ်ထားသည်မဟုတ်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဂျော်ဂျီယာမှအကောင်းဆုံးအိမ်ခြံမြေရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအခွင့်အလမ်းများကိုလည်းကူညီပေးပါသည်။ ဂျော်ဂျီယာသို့မဟုတ်ကမ်းလွန်၊ ဂျော်ဂျီယာရှိလူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်များနှင့်ငွေရေးကြေးရေးစီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်းနှင့်အခြားအရာများပါဝင်သည်။
ကျနော်တို့တတ်နိုင်သည် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဝန်ဆောင်မှုများအားဖြင့်နိုင်ငံသား ကျွန်တော်တို့ရဲ့တတ်နိုင်မှတဆင့်ဂျော်ဂျီယာအဘို့ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဥပဒေကုမ္ပဏီ ဂျော်ဂျီယာအတွက်, တတ်နိုင်သောရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးရှေ့ရပျ, ဂျော်ဂျီယာများအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတိုင်ပင်ခံများကတတ်နိုင်နိုင်ငံသားအဖြစ်, ဂျော်ဂျီယာအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရှေ့နေများကတတ်နိုင်နိုင်ငံသားအဖြစ်နှင့်ဂျော်ဂျီယာများအတွက်တတ်နိုင်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအကြံပေးကုမ္ပဏီ
ဂျော်ဂျီယာမှနိုင်ငံပေါင်း ၃၇ နိုင်ငံသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှု။
ဂျော်ဂျီယာရှိနိုင်ငံပေါင်း ၃၇ နိုင်ငံသို့ရွှေဗီဇာ။
ဂျော်ဂျီယာမှနိုင်ငံပေါင်း ၃၇ နိုင်ငံသို့ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်။
ဂျော်ဂျီယာမှနိုင်ငံပေါင်း ၁၀၆ နိုင်ငံသို့စီးပွားရေးအခြေပြုလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး။
ဂျော်ဂျီယာရှိနိုင်ငံပေါင်း ၃၇ နိုင်ငံသို့ရွှေဗီဇာအစီအစဉ်များ။
ဂျော်ဂျီယာမှနိုင်ငံပေါင်း ၃၇ နိုင်ငံသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်များဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှု။
ဂျော်ဂျီယာမှနိုင်ငံပေါင်း ၃၇ နိုင်ငံသို့ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်အစီအစဉ်များ။
ဂျော်ဂျီယာမှနိုင်ငံပေါင်း ၁၀၆ နိုင်ငံအထိစီးပွားရေးလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအစီအစဉ်များ။
သိရန်လိုအပ်သည် - ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်ဂျော်ဂျီယာနိုင်ငံသားဖြစ်သည်
ဂျော်ဂျီယာအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရှေ့နေမှနိုင်ငံသားကဂျော်ဂျီယာသို့ရင်းနှီးမြုပ်နှံခြင်းဖြင့်သင်၏အောင်မြင်သောနိုင်ငံသားအတွက်အသေးစိတ်စာရွက်စာတမ်းအထောက်အပံ့များကိုပေးလိမ့်မည်။ ဂျော်ဂျီယာသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှုအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏စံဝန်ဆောင်မှုများတွင် -
မည်သည့်အကြံပြုချက်များကို အခြေခံ၍ ဂျော်ဂျီယာမှသို့မဟုတ်ဂျော်ဂျီယာသို့ပြောင်းရွှေ့ရန်သင်၏လိုအပ်ချက်များကိုကျွန်ုပ်တို့၏ရှေ့နေများကနားလည်လိမ့်မည်
ဂျော်ဂျီယာနိုင်ငံသားဖြစ်မှုကိုရယူရန်နှင့်ငြင်းဆန်မှုအန္တရာယ်ကိုလျှော့ချရန်အတွက်ဖောက်သည်များအားဂျော်ဂျီယာအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသားပြုမှုကိုအကြံပြုခြင်းမပြုမီအစီရင်ခံစာပြင်ဆင်ရန်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကန ဦး လျောက်ပတ်စွာစေ့စေ့လေ့လာခြင်းကိုပြုလုပ်သည်။
ဂျော်ဂျီယာအတွက်လုံလောက်သောလုံ့လဝီရိယရှိသောအစီရင်ခံစာအပေါ် အခြေခံ၍ ပိုမိုကောင်းမွန်သောအောင်မြင်မှုအတွက်အခြားအစီအစဉ်များကိုကျွန်ုပ်တို့အကြံပြုပါသည်။
သင်၏နိုင်ငံသားဖြစ်မှုကိုဂျော်ဂျီယာအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလျှောက်ထားခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့ဖောက်သည်များနှင့်မိသားစု ၀ င်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်များကိုစစ်ဆေးရန်လိုသည်။
ဂျော်ဂျီယာရှိအောက်ဖော်ပြပါပုဂ္ဂိုလ်များသို့မဟုတ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအားဂျော်ဂျီယာရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ၀ န်ဆောင်မှုများမှနိုင်ငံသားအဖြစ်ကိုကျွန်ုပ်တို့ပံ့ပိုးကူညီခြင်းသို့မဟုတ်ထောက်ပံ့ခြင်းမပြုပါ။
နိုင်ငံသားအဖြစ် ဂျော်ဂျီယာများအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုန်ဆောင်မှုများက ကုန်သည်များသို့မဟုတ်ဂျော်ဂျီယာမှလက်နက်များနှင့်ခဲယမ်းမီးကျောက်ဖြန့်ဖြူးသူများကိုကမ်းလှမ်းခြင်းမရှိပါ။
နိုင်ငံသားအဖြစ် ဂျော်ဂျီယာများအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်များအားဖြင့်ဖြစ်သည် ဂျော်ဂျီယာတွင်နည်းပညာဆိုင်ရာစောင့်ကြည့်ခြင်းသို့မဟုတ်ဂျော်ဂျီယာတွင်ဖြစ်စေ၊ သို့ဖြစ်စေရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်များကိုစက်မှုစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုခြင်းအတွက်ကမ်းလှမ်းခြင်းမရှိပါ။
နိုင်ငံသားအဖြစ် ဂျော်ဂျီယာအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတိုင်ပင်ခံသည် ဂျော်ဂျီယာရှိမည်သည့်တရားမဝင်သို့မဟုတ်ပြစ်မှုဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုများအတွက်မဆိုကမ်းလှမ်းခြင်းမရှိပါ။
နိုင်ငံသားအဖြစ် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအထောက်အပံ့ဖြင့် ဂျော်ဂျီယာအတွက် ဂျော်ဂျီယာရှိမျိုးရိုးဗီဇဆိုင်ရာပစ္စည်းများကိုကိုင်တွယ်သူတစ် ဦး ချင်းအတွက်မဟုတ်ပါ။
နိုင်ငံသားအဖြစ် ဂျော်ဂျီယာများအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုန်ဆောင်မှုများက ဂျော်ဂျီယာရှိအန္တရာယ်ရှိသောသို့မဟုတ်အန္တရာယ်ရှိသောဇီဝဗေဒသို့မဟုတ်နျူကလီးယားလက်နက်များရောင်းဝယ်သောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်မဟုတ်ပါ။
နိုင်ငံသားအဖြစ် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်အားဖြင့် ကုန်သွယ်ရေး၊ ဂျော်ဂျီယာတွင်သိုလှောင်ခြင်းသို့မဟုတ်လူ့ကိုယ်တွင်းအင်္ဂါများကိုသယ်ယူပို့ဆောင်ခြင်းတို့အတွက်ဂျော်ဂျီယာအတွက်တစ် ဦး ချင်းစီအားဂျော်ဂျီယာအတွက်အထောက်အပံ့မရနိုင်ပါ။
နိုင်ငံသားအဖြစ် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့် ဂျော်ဂျီယာအတွက် တရားမဝင်မွေးစားအေဂျင်စီများအတွက်မဟုတ်ပါဘူး။
နိုင်ငံသားအဖြစ် ပရိုဂရမ်ဝန်ဆောင်မှု ဂျော်ဂျီယာအတွက် ဂျော်ဂျီယာရှိဘာသာရေးကိုးကွယ်မှုများနှင့်၎င်းတို့၏ပရဟိတလုပ်ငန်းများအတွက်မဟုတ်ပါ။
နိုင်ငံသားအဖြစ် အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုန်ဆောင်မှုများက Georgia ဂျော်ဂျီယာရှိညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုကြည့်ရှုသူများအားပေးအပ်ခြင်းမရှိပါ။
ကျွန်ုပ်တို့၏နိုင်ငံသား ဂျော်ဂျီယာအတွက်ရှေ့ရပျ ဂျော်ဂျီယာရှိမူးယစ်ဆေးဝါးရောင်းဝယ်ဖောက်ကားမှုလုပ်ငန်းများနှင့်ပတ်သက်သည့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုမထောက်ပံ့ပါနှင့်။
“ အရေးကြီးတဲ့သတိပေးချက် : MM Solutions INC သည်ဂျော်ဂျီယာနှင့်၎င်းတို့၏ KYC အတွက်ဖောက်သည်များအတွက် AML စာရွက်စာတမ်းများကိုတိကျမှန်ကန်စေရန်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားသော်လည်း၊ ဂျော်ဂျီယာရှိအာဏာပိုင်များမှလျှောက်ထားမှုကိုအတည်ပြုရန်အတွက်ငြင်းပယ်မှုအတွက်ကျွန်ုပ်တို့တွင်တာဝန်ရှိသည်။ နိုင်ငံသားအဖြစ် ဂျော်ဂျီယာတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့်။
ဂျော်ဂျီယာအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ၀ န်ဆောင်မှုဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏နိုင်ငံသားသည်ဂျော်ဂျီယာအတွက်အကောင်းဆုံးအောင်မြင်နိုင်သောနှုန်းဖြင့်စျေးအသက်သာဆုံးစျေးကိုပေးသည်။
သင်၏နိုင်ငံသားဖြစ်မှုကိုဂျော်ဂျီယာမတိုင်မှီနှင့်ခွင့်ပြုချက်အပြီးတွင်ကျွန်ုပ်တို့၏အကြီးတန်းအဖွဲ့ ၀ င်သည်ဂျော်ဂျီယာအတွက်စီးပွားရေးသို့မဟုတ်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအထောက်အပံ့အတွက်ထိုတွင်ရှိလိမ့်မည်
ကျွန်ုပ်တို့သည်ဂျော်ဂျီယာအပါအ ၀ င်နိုင်ငံသားပြုမှုတွင်နိုင်ငံတကာအတွေ့အကြုံရှိပြီးအကောင်းဆုံးဝန်ဆောင်မှုများကိုကမ္ဘာအနှံ့ရှိသုံးစွဲသူများအားကူညီပေးနေသည်။
ဂျော်ဂျီယာသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်သင်၏နိုင်ငံသားပျက်ကွက်ပါကကျွန်ုပ်တို့ဝန်ဆောင်မှုပေးသောနိုင်ငံပေါင်း ၃၆ ခုရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်အစီအစဉ်ခနှင့်အဆင်သင့်ဖြစ်သည်။
ဂျော်ဂျီယာအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှုအတွက်ကုန်ကျစရိတ်ကိုတွက်ချက်ရန်မိသားစု ၀ င်များနှင့်သူတို့၏အသက်များအပါအဝင်အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုဖြည့်စွက်ပါ။ ဂျော်ဂျီယာအတွက် ၀ ယ်ယူသူအမြောက်အများကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကုန်ကျစရိတ်သက်သာစွာဖြင့်ပိုမိုကောင်းမွန်သော ၀ န်ဆောင်မှုများကိုပေးနိုင်သည်။ ဂျော်ဂျီယာအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်နှင့်အခြားကုန်ကျစရိတ်များအရနိုင်ငံသားဖြစ်မှုအတွက်ကုန်ကျစရိတ်များပါဝင်သည်။
ပုံစံ ဗီဇာ ဂျော်ဂျီယာအတွက်
ကျွန်ုပ်တို့သည်ချက်ချင်းသို့မဟုတ်အနာဂတ်လိုအပ်ချက်များအတွက်ကျွန်ုပ်တို့ဂျော်ဂျီယာတွင်ပေးသော ၀ န်ဆောင်မှုအနည်းငယ်ကိုသာစာရင်းပြုစုထားသည်။
သင်သည်သင်၏မိသားစုနှင့်အတူဂျော်ဂျီယာသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းဖြင့်ပြောင်းရွှေ့ရန်စီစဉ်နေပါကကျွန်ုပ်တို့သည်ဂျော်ဂျီယာအတွက်သင်၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်အနေနှင့်၊ ဂျော်ဂျီယာတွင်တတ်နိုင်သောစျေးနှုန်းဖြင့်မည်သည့်အချိန်နှင့်မည်သည့်အချိန်တွင်သင်လိုအပ်မည်ကိုအခြား ၀ န်ဆောင်မှုများစွာပေးထားပါသည်။
နိုင်ငံသားဖြစ်ခြင်းအပြင်ဂျော်ဂျီယာအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာအကြံပေးခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဂျော်ဂျီယာတွင်လည်းစီးပွားရေး၊ အိုင်တီနှင့် HR ၀ န်ဆောင်မှုများကိုပေးသည်။ ၎င်းသည်ဂျော်ဂျီယာနှင့်အခြားနိုင်ငံပေါင်း ၁၀၆ ခုအတွက်တစ်နေရာတည်းတွင်တစ်နေရာတည်းဖြစ်စေရန်ဂျော်ဂျီယာအတွက်အခြားအတိုင်ပင်ခံများမှပေးသောထီးတစ်ချောင်းအောက်တွင်သင်မတွေ့နိုင်ပါ။
ဂျော်ဂျီယာအတွက်မိသားစုများ၊ တစ် ဦး ချင်းစီနှင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုသူတို့၏ရည်မှန်းချက်များနှင့်ရည်မှန်းချက်များအောင်မြင်ရန်ကူညီရန်နှစ်ပေါင်းများစွာအတွေ့အကြုံနှစ်ပေါင်းများစွာနှင့်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးနိုင်ငံပေါင်း ၁၀၆ နိုင်ငံ၌ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခဲ့သည်။
ငါတို့သည်သင်တို့ကိုကူညီနိုငျ ဂျော်ဂျီယာတွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှတ်ပုံတင်ပါ or Offshore နှင့် 106 နိုင်ငံများ (ဂျော်ဂျီယာတွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှတ်ပုံတင်ခြင်း၏ကုန်ကျစရိတ်သည်ကျွန်ုပ်တို့နှင့် ပို၍ ဈေးချိုသည်။ )
ဂျော်ဂျီယာသို့ပြောင်းရွှေ့လာသည့်မည်သည့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူမဆိုလိုအပ်လိမ့်မည် ဂျော်ဂျီယာရှိပုဂ္ဂိုလ်ရေးဘဏ်အကောင့် ဂျော်ဂျီယာရှိကုမ္ပဏီဘဏ်စာရင်းနှင့်လည်းကမ်းလွန်ဘဏ်စာရင်းများကိုလည်းကျွန်ုပ်တို့ကူညီနိုင်သည်။
Incase သင်အဘို့, ဂျော်ဂျီယာအတွက်တိုင်ပင်လိုအပ်ပါတယ် ဂျော်ဂျီယာရှိဒီဂျစ်တယ်ငွေပေးချေမှုဖြေရှင်းချက် ဂျော်ဂျီယာရှိရိုးရာသို့မဟုတ် fintech ငွေပေးချေမှုတံခါးပေါက်သို့မဟုတ် crypto ဖြေရှင်းမှုများကဲ့သို့ကျွန်ုပ်တို့ကိုအသိပေးပါ။
နိုင်ငံသားအဖြစ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့် ဂျော်ဂျီယာကိုသင်စီစဉ်မယ်ဆိုရင် ဂျော်ဂျီယာတွင်ရှိသည့်စီးပွားရေးကို ၀ ယ်ခြင်းဖြင့်လုပ်ငန်းတစ်ခုစတင်ရန် ဂျော်ဂျီယာမှာလက်ငင်းစတင်ဘို့။
ဂျော်ဂျီယာရှိ HR ဝန်ဆောင်မှုများ
ကျွန်တော်တို့၏ ဂျော်ဂျီယာရှိလူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်ကုမ္ပဏီ အမြန်စုဆောင်းမှုနှင့်အတူသင်ကူညီနိုင်သည်။ သင်လည်းလုပ်နိုင်တယ် ဂျော်ဂျီယာတွင်နေရာလွတ် post အခမဲ့ဖြစ်သည်။
ဂျော်ဂျီယာအတွက် virtual ဖုန်းနံပါတ်များ
ဂျော်ဂျီယာအတွက်စီးပွားရေးတယ်လီဖုန်းစနစ်များ ဂျော်ဂျီယာများအတွက်ကို virtual နံပါတ်များ 102 နိုင်ငံများနှင့် 291 မြို့ကြီးများ။
စာရင်းကိုင်, ဂျော်ဂျီယာအတွက်ကြောင့်လုံ့လဝီရိယနှင့် အများကြီးပို.
ဂျော်ဂျီယာရှိ Virtual ရုံးလိပ်စာ
ဂျော်ဂျီယာတွင် Setup စီးပွားရေးလုပ်ငန်း
နိုင်ငံသားဖြစ်ပြီးနောက်ဂျော်ဂျီယာသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်၊ အတွက် setup ကိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်း Georgia.
ဂျော်ဂျီယာတွင် Web ဒီဇိုင်း
ဂျော်ဂျီယာတွင် web ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု
ဂျော်ဂျီယာတွင် blockchain ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု
ဂျော်ဂျီယာရှိ App ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု
ဂျော်ဂျီယာတွင် software ကိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု
ကျွန်ုပ်တို့သည်ဂျော်ဂျီယာအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာအဖြေများအားဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှုကိုထောက်ပံ့ပေးသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များအတွက်အောင်မြင်မှုသည်အလွန်အရေးကြီးသည်။ ဂျော်ဂျီယာအတွက်ကျွန်ုပ်တို့သည်ခေါင်းဆောင်များဖြစ်သည်။ ဂျော်ဂျီယာအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏ဥပဒေအကြံပေးကုမ္ပဏီသည်ဂျော်ဂျီယာတွင်အကောင်းဆုံးလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးကိုယ်စားလှယ်များရှိသည်။ ဂျော်ဂျီယာတစ် ဦး ချင်းစီနှင့်၎င်းတို့၏မိသားစုများအတွက်ရှင်းလင်းသောမဟာဗျူဟာမြောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြေရှင်းချက်။ ဂျော်ဂျီယာအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအဖွဲ့မှကျွန်ုပ်တို့၏နိုင်ငံသားဖြစ်မှုသည်လိုင်း၏အောင်မြင်မှုအတွက်ထုံးစံအတိုင်းဖြေရှင်းမှုများကိုပေးသည်။
သင်၏မိသားစုဝင်များ (ကလေးများ၊ ဇနီး၊ မိဘများ) သည်ဂျော်ဂျီယာတွင်နေထိုင်ခွင့်ဗီဇာအတည်ပြုပြီးသည်နှင့်ဂျော်ဂျီယာတွင်နေထိုင်ရန်ခွင့်ပြုချက်ရှိသည်။
ရှေ့နေပါဝါရရှိရန်ကျွန်ုပ်တို့အပိုမယူပါ။ သင်အနေဖြင့်ဂျော်ဂျီယာတွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းကိုအဝေးမှစတင်ရန်စီစဉ်ထားပါကသင်၏ဂျော်ဂျီယာပိုင်နက်တွင်အသုံးပြုရန်သင်၏ရှေ့နေအားတရားဝင်ဖြစ်သင့်သည်။ သင်၏နေထိုင်ရာနိုင်ငံအပေါ် မူတည်၍ ၎င်းကိုအက်စပလီကေးရှင်းသို့မဟုတ်ဂျော်ဂျီယာကောင်စစ်ဝန်ရုံးကတရားဝင်ဖြစ်စေသင့်သည်။
မကြာခဏမေးသောမေးခွန်းများ - ဂျော်ဂျီယာတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှု
ဂျော်ဂျီယာသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခွင့်ကိုဂျော်ဂျီယာ၏စီးပွားရေးတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၊ စီးပွားရေး၊ အိမ်ခြံမြေ၊ အစိုးရငွေချေးစာချုပ်များစသည်ဖြင့်ဂျော်ဂျီယာ၏နေထိုင်မှုကိုရရှိခြင်းဟုအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်နိုင်သည်။ ဂျော်ဂျီယာသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ရန်လျှောက်ထားခြင်း၊ ဂျော်ဂျီယာအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ၀ န်ဆောင်မှုများဖြင့်နေထိုင်ခွင့်၊ ဂျော်ဂျီယာရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရှေ့နေများကအကောင်းဆုံးနေထိုင်ခွင့်၊ ဂျော်ဂျီယာရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရှေ့နေများမှအကောင်းဆုံးနေထိုင်ခွင့်နှင့်ဂျော်ဂျီယာအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတိုင်ပင်ခံများကအကောင်းဆုံးနေထိုင်ခွင့်၊ ဂျော်ဂျီယာရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအေးဂျင့်များကအကောင်းဆုံးနေထိုင်ခွင့်နှင့်အကောင်းဆုံးလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအတိုင်ပင်ခံကုမ္ပဏီများမှထောက်ပံ့ခြင်း ဂျော်ဂျီယာမှာ။
ဂျော်ဂျီယာအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ၀ န်ဆောင်မှုများဖြင့်နေထိုင်ခွင့် ဂျော်ဂျီယာရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုယ်စားလှယ်များနေထိုင်ခွင့် ဂျော်ဂျီယာရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရှေ့နေများကနေထိုင်ခွင့် ဂျော်ဂျီယာရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရှေ့နေများကနေထိုင်ခွင့် ဂျော်ဂျီယာအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတိုင်ပင်ခံများကနေထိုင်မှု
ဂျော်ဂျီယာသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသားအဖြစ်ကိုဂျော်ဂျီယာတွင်စီးပွားရေး၊ အိမ်ခြံမြေ၊ အစိုးရငွေချေးစာချုပ်များစသည့်နည်းလမ်းများဖြင့်ဂျော်ဂျီယာ၏စီးပွားရေးတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းဖြင့်ဂျော်ဂျီယာနိုင်ငံသားအဖြစ်ခံယူခြင်းဟုသတ်မှတ်နိုင်သည်။ ဂျော်ဂျီယာတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှု၊ ဂျော်ဂျီယာတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာ ၀ န်ဆောင်မှုများဖြင့်နိုင်ငံသားခံယူခြင်းအားဖြင့်ဂျော်ဂျီယာတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်ဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှု၊ ဂျော်ဂျီယာရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာရှေ့နေများကအကောင်းဆုံးနိုင်ငံသားဖြစ်ခြင်း၊ ဂျော်ဂျီယာရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအေးဂျင့်များ၏အကောင်းဆုံးနိုင်ငံသားဖြစ်မှုနှင့်ဂျော်ဂျီယာရှိအကောင်းဆုံးလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအကြံပေးကုမ္ပဏီများ။
ဂျော်ဂျီယာအတွက်စျေးချိုသောလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး ၀ န်ဆောင်မှုများ ဂျော်ဂျီယာရှိစျေးနှုန်းချိုသာသောလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဆိုင်ရာရှေ့နေများ | ဂျော်ဂျီယာရှိစျေးနှုန်းချိုသာသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးရှေ့နေများ ဂျော်ဂျီယာရှိစျေးချိုသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးရှေ့နေများ ဂျော်ဂျီယာအတွက်တတ်နိုင်သောရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအကြံပေး | ဂျော်ဂျီယာအတွက်တတ်နိုင်သောလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဥပဒေကုမ္ပဏီများ
ဂျော်ဂျီယာတွင်ဒုတိယမြောက်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ကိုဂျော်ဂျီယာ၏စီးပွားရေးတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၊ အိမ်ခြံမြေ၊ စီးပွားရေး၊ အစိုးရငွေချေးစာချုပ်များစသည်ဖြင့်ဂျော်ဂျီယာနိုင်ငံ၏တရားဝင်နိုင်ငံသားအဖြစ်သတ်မှတ်ခြင်းစသည်ဖြင့်သတ်မှတ်နိုင်သည်။ ဂျော်ဂျီယာအတွက်ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်လျှောက်ထားပါ၊ ဂျော်ဂျီယာအတွက်အကောင်းဆုံးနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ရှေ့နေများ၊ ဂျော်ဂျီယာတွင်ဒုတိယမြောက်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ရှေ့နေများနှင့်ဂျော်ဂျီယာအတွက်အကောင်းဆုံးနိုင်ငံကူးလက်မှတ်အတိုင်ပင်ခံများ၊ ဂျော်ဂျီယာတွင်အကောင်းဆုံးနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ကိုယ်စားလှယ်များနှင့်ဂျော်ဂျီယာတွင်အကောင်းဆုံးလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအတိုင်ပင်ခံကုမ္ပဏီများမှဂျော်ဂျီယာအတွက်ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ် ၀ န်ဆောင်မှုများ
ဂျော်ဂျီယာအတွက်ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ဝန်ဆောင်မှုများ | ဂျော်ဂျီယာရှိဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ကိုယ်စားလှယ်များ ဂျော်ဂျီယာတွင်ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ရှေ့နေများ ဂျော်ဂျီယာနိုင်ငံရှိနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ရှေ့နေများ ဂျော်ဂျီယာအတွက်ဒုတိယအနိုင်ငံကူးလက်မှတ်အတိုင်ပင်ခံ
ဂျော်ဂျီယာရှိရွှေဗီဇာကိုအစိုးရ၏ငွေချေးစာချုပ်၊ စီးပွားရေး၊ အိမ်ခြံမြေစသည့်နည်းလမ်းများဖြင့်ဂျော်ဂျီယာ၏စီးပွားရေးတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းဖြင့်ဂျော်ဂျီယာ၏နေထိုင်ခွင့်လက်မှတ်ရယူခြင်းဟုအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်နိုင်သည်။ ဂျော်ဂျီယာသို့ရွှေဗီဇာလျှောက်ထားခြင်း၊ ဂျော်ဂျီယာအတွက်အကောင်းဆုံးရွှေဗီဇာရှေ့နေများ၊ ဂျော်ဂျီယာတွင်အကောင်းဆုံးရွှေဗီဇာရှေ့နေများနှင့်ဂျော်ဂျီယာအတွက်အကောင်းဆုံးရွှေဗီဇာအကြံပေးများ၊ ဂျော်ဂျီယာတွင်အကောင်းဆုံးရွှေဗီဇာကိုယ်စားလှယ်များနှင့်ဂျော်ဂျီယာရှိအကောင်းဆုံးလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအတိုင်ပင်ခံကုမ္ပဏီများမှတစ်ဆင့်ဂျော်ဂျီယာအတွက်ရွှေဗီဇာဝန်ဆောင်မှုများ
ဂျော်ဂျီယာအတွက်ရွှေဗီဇာဝန်ဆောင်မှုများ | ဂျော်ဂျီယာရှိရွှေဗီဇာကိုယ်စားလှယ်များ ဂျော်ဂျီယာရှိရွှေဗီဇာရှေ့နေများ ဂျော်ဂျီယာရှိရွှေဗီဇာရှေ့နေများ ဂျော်ဂျီယာအတွက်ရွှေဗီဇာအတိုင်ပင်ခံ
ဂျော်ဂျီယာတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှုအတွက်အနည်းဆုံးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမှာအမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၂၅၀၀၀ (၃၀၀၀၀၀ GEL) ဖြစ်သည်။
နိုင်ငံသားဖြစ်မှုကိုဂျော်ဂျီယာသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှုကိုဂျော်ဂျီယာအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရန်ပုံငွေလိုအပ်ချက်အရနိုင်ငံသားပြုမှုသည်အမြတ်အစွန်းမြင့်မားသောလူပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး ချင်းအတွက်ဖြစ်သည်။ ဂျော်ဂျီယာသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှုအတွက်တိုင်ပင်ကြေးကိုသာပေးပြီး၊
နိုင်ငံသားဖြစ်မှုကိုအာရှမှဂျော်ဂျီယာသို့ပြောင်းခြင်း၊ နိုင်ငံမှအာဖရိကမှဂျော်ဂျီယာသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၊ ဥရောပမှဂျော်ဂျီယာသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၊ တောင်အမေရိကမှဂျော်ဂျီယာသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်ခြင်းသည်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ၀ န်ဆောင်မှုဖြင့်နိုင်ငံသားပြုခြင်းကိုမည်သည့်နိုင်ငံသားမဆိုအသုံးပြုနိုင်သည်။ မလေးရှားမှဂျော်ဂျီယာသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသား၊ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှမှဂျော်ဂျီယာသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၊ အင်ဒိုနီးရှားမှဂျော်ဂျီယာသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၊ သီရိလင်္ကာမှဂျော်ဂျီယာသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၊ နီပေါမှဂျော်ဂျီယာသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၊ နိုင်ငံမှအိန္ဒိယမှဂျော်ဂျီယာသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်နိုင်ငံသား ယူအေအီးမှဂျော်ဂျီယာမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့်။
ဂျော်ဂျီယာစီးပွားရေးနှင့်ရေရှည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ၀ န်ကြီးဌာန
ဂျော်ဂျီယာရှိသိမ်းပိုက်ထားသောနယ်မြေများ၊ နေရာထိုင်ခင်းနှင့်ဒုက္ခသည်များမှပြည်တွင်းရွှေ့ပြောင်းပြည်သူများ၏ ၀ န်ကြီးဌာန
စီးပွားရေး၊ လူမှုရေးနှင့်ယဉ်ကျေးမှုအခွင့်အရေးကော်မတီ (CESCR)
အလုပ်သမား၊ ကျန်းမာရေးနှင့်လူမှုရေး ၀ န်ကြီးဌာန
ပြန်လည်ရင်ကြားစေ့ရေးနှင့်လူထုတန်းတူရေး ၀ န်ကြီးဌာန၏ရုံး
အခမဲ့တရားဝင်အကူအညီပေးရေး Portal ကို
ဂျော်ဂျီယာတရားရေး ၀ န်ကြီးဌာန
ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားများနှင့်၎င်းတို့၏မိသားစု ၀ င်များ၏အခွင့်အရေးများကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးကော်မတီ (CMW)
link ကိုမှ ဂျော်ဂျီယာလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဌာန ဂျော်ဂျီယာတွင်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးကိုအရှိန်မြှင့်ရန်အတွက်မူဝါဒချမှတ်ရန်တာဝန်ရှိသည်